Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAntonella
UAntonella unezimvo eziyi-163 zezinye iindawo.
Kanye ngaselwandle, indawo enomtsalane, etofotofo ejonge kwiGulf of Biodola, uhambo olufutshane olusuka eScaglieri kunxweme olusemantla e-Elba kunye neekhilomitha ezimbalwa ukusuka ePortoferraio, kumbindi wendlu encinci yezindlu zemveli ezinemibala ye-pastel, enezitrato ezimxinwa. ekhokelela, ekoneni, ngokungathi kungomlingo, kumatye anqabileyo. I-terrace enkulu, ngokuthe ngqo phezu kolwandle, inika ukushona kwelanga okungalibalekiyo, njengoko ilanga litshona phakathi kwe-Elba kunye nesiqithi saseCapraia. Indawo yokuhlala ilungele usapho okanye iqela labahlobo abafuna indawo yokuhlala kufutshane nolwandle. Indawo ikwayindawo entle yokuqalisa ukujonga zonke ezinye iilwandle ezithandekayo kunye nemimangaliso yendalo esi siqithi esinayo, kwimizuzu nje embalwa uhamba ngemoto. Ulwandle lwaseScaglieri, oluneendawo zokutyela, imivalo, izinto eziluncedo kunye neevenkile ngokubanzi, ukuqesha izikhephe kunye neeklabhu zaselwandle, zikufuphi kakhulu.
Ulwandle malunga neemitha ezingama-50
Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe ngesicelo, i-€ 25 ngeveki
Ifenitshala etofotofo, amagumbi okuhlambela amabini, umatshini wokuhlamba izitya, umabonakude onedekhowuda (iindwendwe zinokuza nekhadi lazo le-TV elihlawulelwayo)
Ngaphandle kunye nezinto eziluncedo: ithala elikhulu elinefenitshala elijonge ulwandle.
Iintlawulo ezongezelelweyo zonke-zibandakanya inkonzo intlawulo € 180, idiphozithi € 200; ilinen engabonelelwanga (efumanekayo ukurenta kwisiza nge-€20 ngomntu/utshintsho)
Mna Gigli ulala max 6 abantu.
Le ndlu inendawo yokuphumla enencasa enencasa, enezinto ezibonisa incasa yabaniniyo, ayiqulathanga indawo yokutyela kuphela kodwa kunye nesofa kunye neTV enedekhoda (kubo bonke abo bangakwaziyo ukwenza ngaphandle kwekhadi labo leTV) abanokufikelela kwi ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dishwasher; amagumbi okulala amathathu - kabini, igumbi lokulala elinebhedi okanye iibhedi ezingamawele kunye negumbi lokulala elineebhedi ezinkulu. I-lounge ivula kwi-terrace edibeneyo, i-shared pergola ekhangayo, ehamba kunye, kunye nombono omhle wolwandle, idlula amagumbi amabini okulala kunye negumbi elincinci elinomatshini wokuhlamba kunye neshawa ngamanzi ashushu; I-terrace ineendawo zokuhlala ezikhululekile zokuphumla kunye nokutshisa ilanga. Le ndlu inegumbi lokuhlambela elineshawa enamagumbi kunye nendlu yangasese eyongezelelweyo (WC, isitya sokuhlambela kunye nebidet). Ikhaya likwafudunyezwe embindini (inqabile kakhulu kule ndawo) kwaye ke ngoko inokuqeshwa unyaka wonke. Oku kwenza kube nomtsalane ngakumbi kubo bonke abo bathanda ukonwabela ulwandle kunye neelwandle ngamaxesha apholileyo onyaka, xa bengaxinaninga ngabakhenkethi.
Le ndlu inendawo yokuphumla enencasa enencasa, enezinto ezibonisa incasa yabaniniyo, ayiqulathanga indawo yokutyela kuphela kodwa kunye nesofa kunye neTV enedekhoda (kubo bonke abo bangakwaziyo ukwenza ngaphandle kwekhadi labo leTV) abanokufikelela kwi ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dishwasher; amagumbi okulala amathathu - aphindwe kabini, igumbi lokulala elinebhedi okanye iibhedi ezingamawele kunye negumbi lokulala elineebhedi ezinkulu. I-lounge ivula kwi-terrace edibeneyo, i-shared pergola ekhangayo, ehamba kunye, kunye nombono omhle wolwandle, idlula amagumbi amabini okulala kunye negumbi elincinci elinomatshini wokuhlamba kunye neshawa ngamanzi ashushu; I-terrace ineendawo zokuhlala ezikhululekile zokuphumla kunye nokutshisa ilanga. Le ndlu inegumbi lokuhlambela elineshawa enamagumbi kunye nendlu yangasese eyongezelelweyo (WC, isitya sokuhlambela kunye nebidet). Ikhaya likwafudunyezwa embindini (inqabile kakhulu kule ndawo) kwaye ke ngoko inokuqeshwa unyaka wonke. Oku kwenza kube nomtsalane ngakumbi kubo bonke abo bathanda ukonwabela ulwandle kunye neelwandle ngamaxesha apholileyo onyaka, xa bengaxinaninga ngabakhenkethi.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-163 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Scaglieri